भाइरल झांक्री र डीबी बीच सम्बन्ध बिग्रनुको कारण खुल्यो, डिबिले देखाए एक एक हिसाब ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 15, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल झांक्री र डीबी बीच सम्बन्ध बिग्रनुको कारण खुल्यो, डिबिले देखाए एक एक हिसाब ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
मोरंग। यो कुरा सुन्दै अचम्म फिल्म अथवा मनगडन्ते हावा कुरा जस्तो लागेपनी बास्तबमै मोरङको बेलबारिमा कसैले सोच्नै नसकिने घटना घटेको छ। एकाएक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आ.त्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेको छ ।
करिब छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आ.त्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ । बच्चादेखि वृद्ध सबै बिरामी परेपछी धामी ले चिन्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कु.टपि.ट समेत गरेका थिए ।
उनले अहिले धेरै चेला र चेली उतारिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय झाक्री र डीबी बीच केहि पैसाको बिबाद आएको छ र झाक्रीले बेलबारी बस्न छोडेर आफ्नो गाउ ताप्लेजुङ्ग गएका छन् । वास्तविक भएको के हो कति पैसा उठेको थियो ?